စာခြုပျသဈကမျးလှမျးတာကို ပယျခတြဲ့ အလာဘာရဲ့ အေးဂငျြ့က လောဘကွီးတဲ့ သတ်တဝါတဈမြိုးလို့ ဝဖေနျလိုကျတဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈဥက်ကဌဟောငျး – Myan Ball
ဘိုငျယနျမွူးနဈဥက်ကဌဟောငျး အူလီဟိုးနကျဈက နောကျခံလူ အလာဘာရဲ့ အေးဂငျြ့ဖွဈသူက စာခြုပျသဈကမျးလှမျးတာကို ပယျခတြာနဲ့ ပတျသကျပွီး “လောဘကွီးတဲ့ သတ်တဝါတဈမြိုး”လို့ အမညျတပျပွီး ဝဖေနျသှားခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျကစားသမားရဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးဟာ နောကျနှရောသီမှာ ကုနျဆုံးမှာဖွဈပွီး စာခြုပျသဈကမျးလှမျးခဲ့ပမေယျ့ ကွိမျဖနျမြားစှာ ပယျခခြဲ့တယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သို့သျောလညျး အူလီဟိုးနကျဈက ကစားသမားရဲ့ အေးဂငျြ့ဖွဈတဲ ပီနီဇာဟာဗီက ပွောဆိုဆှေးနှေးတဲ့ အခြိနျမှာ အမွဲတမျးပါဝငျခဲ့တယျလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
“သူ့ (အလာဘာ) မှာ လောဘကွီးတဲ့ သတ်တဝါတဈကောငျ လိုအေးဂငျြ့တဈယောကျရှိနပေါတယျ။ သူက သူ့ကို လှမျးမိုးခှငျ့ အမြားကွီး ပေးထားပါတယျ။ ဒါတှအေားလုံးကလညျး ပိုကျဆံနဲ့ ပတျသကျပါတယျ။ သူက အစောကွီးကတညျးက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကလပျအသငျးမှာ ရှိနပွေီးသားပါ။ သူဘယျကို သှားဦးမှာလဲ? ကြှနျတျောတို့ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက ကျောဖီအတူတူ သောကျခဲ့ဖူးတာ အကွိမျအမြားကွီးပါ။ ဒါပမေယျ့ ဇာဟာဗီကွောငျ့ အဖွမေထှကျလာသေးပါဘူး” လို့ ဂြာမနျသတငျးစာ Sport ကို ဥက်ကဌဟောငျး က ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မနျစီးတီး၊ ပီအကျဈဂြီ၊ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဏျအသငျးတို့ဟာ အလာဘာ ကို ချေါယူရနျ ဆကျသှယျမှုတှေ ပွုလုပျနပွေီလို့ သိရပါတယျ။အလာဘာဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈအကယျဒမီထှကျ ကစားသမားဖွဈပွီး ၂၀၁၀ ကတညျးက ပှဲထှကျကစားထားပွီး အသငျးအတှကျ (၃၈၆) ပှဲကစားထားပါတယျ။
သွစတွီးယား လကျရှေးစငျကစားသမားဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျး ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဖလား (၃) လုံးရခဲ့တဲ့အခြိနျကလညျး အဓိက ကစားသမား တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးဟာ ၂၀၂၀-၂၁ ဘောလုံးရာသီ ဘှနျဒကျဈလီဂါ အဖှငျ့ပှဲကို စကျတငျဘာလ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ ရှောလျကေး အသငျးနဲ့ ကစားရမှာပါ။
စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းတာကို ပယ်ချတဲ့ အလာဘာရဲ့ အေးဂျင့်က လောဘကြီးတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်မျိုးလို့ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဥက္ကဌဟောင်း
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဥက္ကဌဟောင်း အူလီဟိုးနက်စ်က နောက်ခံလူ အလာဘာရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူက စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းတာကို ပယ်ချတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “လောဘကြီးတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်မျိုး”လို့ အမည်တပ်ပြီး ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ကစားသမားရဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းဟာ နောက်နွေရာသီမှာ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အူလီဟိုးနက်စ်က ကစားသမားရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်တဲ ပီနီဇာဟာဗီက ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့ အချိန်မှာ အမြဲတမ်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
“သူ့ (အလာဘာ) မှာ လောဘကြီးတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်ကောင် လိုအေးဂျင့်တစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။ သူက သူ့ကို လွှမ်းမိုးခွင့် အများကြီး ပေးထားပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကလည်း ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ သူက အစောကြီးကတည်းက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကလပ်အသင်းမှာ ရှိနေပြီးသားပါ။ သူဘယ်ကို သွားဦးမှာလဲ? ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကော်ဖီအတူတူ သောက်ခဲ့ဖူးတာ အကြိမ်အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ဇာဟာဗီကြောင့် အဖြေမထွက်လာသေးပါဘူး” လို့ ဂျာမန်သတင်းစာ Sport ကို ဥက္ကဌဟောင်း က ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မန်စီးတီး၊ ပီအက်စ်ဂျီ၊ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရဏ်အသင်းတို့ဟာ အလာဘာ ကို ခေါ်ယူရန် ဆက်သွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။အလာဘာဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အကယ်ဒမီထွက် ကစားသမားဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ကတည်းက ပွဲထွက်ကစားထားပြီး အသင်းအတွက် (၃၈၆) ပွဲကစားထားပါတယ်။
သြစတြီးယား လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဖလား (၃) လုံးရခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်း အဓိက ကစားသမား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ၂၀၂၀-၂၁ ဘောလုံးရာသီ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ အဖွင့်ပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ရှောလ်ကေး အသင်းနဲ့ ကစားရမှာပါ။